Uvavanyo lokuqala lwe-COVID-19 oluchonga izinto ezahlukeneyo eziphuhliswe eSouth Korea
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba ezahlukeneyo » Uvavanyo lokuqala lwe-COVID-19 oluchonga izinto ezahlukeneyo eziphuhliswe eSouth Korea
Iindaba zeMpilo • Utyalo mali • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Iindaba zaseMzantsi Korea • Iindaba ezahlukeneyo
U-SEEGENE UQHUBA UVAVANYO LOKUQALA LOKUGQIBELA-19
ISIQINISEKISO SE-COVID-19 SOMQEQESHI WOVAVANYO SIYAQHUBEKA SILANDELE IINDAWO
S. KOREAN MOTO OZINIKELEYO UKUSEBENZA NOORHULUMENTE
Uvavanyo lokuqala lokwahlulahlula i-COVID-19 okwavavanywayo, okwaziyo ukuvavanya i-COVID-19 kunye nokuchonga ukwahluka okuninzi kwempendulo enye kwaphuhliswa yinkampani ye-biotechnology yaseMzantsi Korea.
Uvavanyo olwahlukileyo lwakwaSeegene, i-'Allplex ™ SARS-CoV-2 Variants I Assay, 'inokufumana kwaye yahlule ukwahluka kwentsholongwane, kubandakanya nezo kufunyaniswe ukuba ziyosulela kwaye ziyabulala.
Uvavanyo olutsha olwahlukileyo alufumani i-COVID-19 kuphela, kodwa lunokuchonga ukwahluka okukhulu kofuzo ekubonakala ukuba kuvela e-UK, eMzantsi Afrika nakwiminye imimandla kubandakanya iJapan neBrazil.
Ngaphaya koko, inokucoca ikhusi okwahlukileyo okrokrisayo, inike ukuqonda kukwahluka okongeziweyo, ikwangumbandela ophambili wetekhnoloji ye-Seegene.
Imveliso entsha yakwaSeegene idibanisa ubuncinci ubuncinci beetekhnoloji zobunini, kubandakanya i-multiplex-real-time PCR yendlela ye-mTOCE ™, yona itekhnoloji yokusika enokuthi isebenzise i-Seegene kuphela. Obu buchwephesha butsha buvumela uvavanyo ukuba lubone indawo ekujolise kuyo apho kuguquka khona, ukuvumela ukufunyanwa ngokuchanekileyo kunye nokwahlulahlula i-coronavirus kunye neenguqu zayo eziguqulweyo ngombhobho omnye we-reagent.
Olunye uphawu oluphambili kusetyenziswa itekhnoloji eyahlukileyo yakwa-Seegene kukulawula ngaphakathi okungapheliyo okunokuqinisekisa inkqubo yovavanyo yonke kubandakanya isampulu efanelekileyo yokuqokelelwa.
Ngokusebenzisa idatha enkulu ka-Seegene yokujonga ngokuzenzekelayo kwi-silico Inkqubo, inkampani ibeka iliso ngokusondeleyo kwaye ihlalutya isiseko sedatha kwi-COVID-19 kunye nokwahluka kwayo, ukuyivumela ukuba iphendule ngokukhawuleza kuphuhliso lwemveliso.
Okwangoku oorhulumente kunye nabasemagunyeni kwezempilo kwihlabathi liphela banyanzelekile ukuba baxhomekeke kulandelelwano lwesampulu nganye, engafanelekanga kuvavanyo olukhulu, lokucoca ulwahlulo lwentsholongwane kumatyala aqinisekileyo e-COVID-19. Igosa lase Seegene lithe "uvavanyo olwahlukileyo lwe-COVID-19 olwahlukileyo luza kukhulisa amandla ovavanyo olukhulu kumlo walo wokulwa nokusasazeka kweentsholongwane eziguqukayo xa ilixesha lokulawula ubhubhane."
Uxilongo lwangoku luxhomekeke kuvavanyo lwe-PCR okanye uvavanyo lwe-antigen / antibody olukhawulezayo lokufumanisa isifo se-COVID-19 okanye ubukho beentsholongwane. Kodwa iindlela ezikhoyo zokuqonda isifo zinemida ekuhloleni intsholongwane, ukubeka iziqhoboshi kuthintelo lobhubhane olusebenzayo. Yindlela ye-PCR kuphela enokuthi ikhusele kwaye ichonge okwahlukileyo, kodwa ukwenza oko kwityhubhu enye ye-reagent bekungekhe kwenzeke de kuvavanyo olwahlukileyo lukaSeegene.
Ngokwamagosa enkampani, u-Seegene uceba "ukubonelela ngovavanyo lwayo olwahlukileyo lwe-COVID-19 kwimibutho yoorhulumente kunye noorhulumente njengeyona nto iphambili kubo."
Igosa longeze ukuba inkampani izakuqhubeka nomsebenzi wayo "ukwenza umsebenzi njengeyona nkampani iphambili yokuxilonga iimolekyuli ngokusebenza ngokusondeleyo nabasemagunyeni kwezempilo kwihlabathi liphela."